Ny sidina Air France miverina mankany Seychelles amin'ny 31 Oktobra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina Air France miverina mankany Seychelles amin'ny 31 Oktobra
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Vaovao avy any Paris no nanamafy izany Air France dia manomboka indray ny sidina mivantana tsy an-kiato mankany Seychelles manomboka ny 31 Oktobra aorian'ny taona maro tsy nahajanona azy ireo dia hidona ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles indray ilay rambony manga sy fotsy ary mena an'ny Air France Colors. Tena tombony lehibe ho an'ireo nosy afovoan'ny ranomasina izay miankina betsaka amin'ny fizahan-tany ho an'ny toekareny.
Ny roa taona lasa taorian'ny nanjanonan'ny Air Seychelles ny serivisy natrehiny ho any Paris, dia avela ho any JOON, ilay mpitatitra mora vidina Air France ihany ny lalana. Saingy ny fanambarana vao haingana momba ny hoavin'ny JOON dia nanosika ny Air France hijery indray an'i Seychelles.
Frantsa dia mijanona ho tsenan'ny fizahantany lehibe ho an'i Seychelles. Ny varotra sehatra tsy miankina amin'ireo nosy dia nanambola olona an-tapitrisany nandritra ny taona maro tao amin'io tsena loharano io izay nahafantatra an'i Seychelles ary nahita ilay toerana tropikaly fandehanana any amin'ny toerana fialantsasatra mety. Ny fiteny frantsay dia iray amin'ireo fiteny ofisialy telo ao amin'ny nosy.
Ny fahatongavan'i Air France dia hita fa tombony ho an'ny indostrian'ny fizahantany Seychelles. Ny doka mety hataon'ny zotram-piaramanidina dia hanampy amin'ny fahitana ireo nosy. Ity vaovao ity dia tsy mety ho tonga amin'ny fotoana tsara kokoa ho an'i Seychelles satria miomana amin'ny fandraisany anjara isan-taona ao amin'ny TOP RESA, ny foibe fivarotana fizahan-tany any Paris amin'ny herinandro ho avy.